Tsy fahombiazana - inona moa izany, ary inona no vokany - tsy niraharaha ny fomba fiasa
Tsy fahombiazana — inona moa izany, ary inona no vokany — tsy niraharaha ny fomba fiasa
Ireo izay mampiseho fa efa nizaka tao anatin’ny telo taona nialoha ny bankirompitra fanangonan-tsonia, telo ny fepetra etsy ambony, na raharaham-barotra ny mpandraharaha, tsy ho nanambara ny bankirompitra.». Ny fitsipika, tanjona tsara ravina amin’ny sisiny malalaka ny fahefana mpitsara: ny lohahevitra dia lasa be dia be pitsarana.
Ny Lalàna Didim-panjakana laharana ny taona dia avy eo dia nametraka izany, fa ny tanjon ny fanambarana ny bankirompitra, ny habetsahan’ny trosa ary noho miavaka fandoavam-bola dia tsy afaka ny ho latsaky ny telo-polo arivo euro. Manana ascertained ny fisian ny vinavina tsotsotra voatanisa etsy ambony, ny fitsarana dia manambara ny tsy niraharaha ny mpandraharaha. Avy izany dia taranaky ny maro ny voka-dratsy izay azo zaraina ho Ny mpandraharaha very ny fisian’ny sy ny fitantanana ny rehetra ny zon ny tompony: ny iray miresaka amin io fifandraisana io.
Ny divestment koa dia mihatra amin ny entana azony tao amin’ny mazava ho azy fa ny bankirompitra fitoriana
Tsy azony ny hanaovana ilay fandidiana, dia ny entana ny tena toetra manokana. ny asa ataon’ny ny mpiantoka manaraka ny fanambarana ny bankirompitra tsy fahombiazan’ny manohitra ny trosa. Ao amin ny fomba tsy maintsy mahomby eo imason’ny tompom-bola, ny fandoavam-bola rehetra mba ho vita amin’ny fanaovana ny bankirompitra taorian’ny fanambarana ny bankirompitra.
momba ny fifandraisana izay dia ny momba ny bankirompitra
Fa tsy, ianao dia ho mitondra ny lohateny hoe ny hijanona ao amin’ny dingana, ny bankirompitra pananana, ny fahazon-dalana ny natolotra ny mpitsara
Ny fivarotana ny anjara lovany